Apple Music Inosuma Saylist Kubatsira Vanhu Vane Matambudziko Ekutaura | IPhone nhau
Nekuda kwekubatana kwakasiyana pakati peApple nemakambani ekurekodha, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakapa Saylists, seti yemazita ekugadzira anowanikwa paApple Music, akagadzirwa achibatana neWarner Music uye yakarongedzerwa batsira vechidiki vane matambudziko ekutaura.
Kugadzira playlist, algorithms akashandiswa izvo doma nziyo dzinodzokorora manzwi izvo zvakaoma kududza kune avo vane dambudziko rekutaura. Zvinoenderana ne BBC News1 mu12 vana muUK vanotambura neimwe nzira yekutaura kusagadzikana.
Mimwe yemishonga yekurapa inoshandiswa navanachiremba kubatsira vechidiki vane mhando idzi dzekushushikana inosanganisira kudzokorora ruzha senge "ch," "s," uye "z." Iwo gumi ekuteedzera ari chikamu cheSaylist, Dzinoumbwa nenziyo zana nemakumi manomwe nenomwe uye pakati padzo tinowana Yakanaka Segehena naLizzo, Pano Pano, Izvozvi naFatboy Slim uye Usatange Izvozvi naDua Lipa.
Saylist's gumi playlists anosarudzwa nekudzokororwa kwemhere: "Ch", "d", "f", "g", "k", "l", "r", "s", "t" uye "z". Kunyangwe idzi zvinyorwa zvekutamba zvichingo sanganisira nziyo muChirungu, chero mushandisi asiri mutsigiri webasa iri anokwanisa kuzviwana nekutsvaga Saylist nekusarudza Playlists sarudzo (chete muUnited States neUnited Kingdom).
Anotaura mutauro Anna Biavati-Smith, uyo akabatana neWarnet Music pachirongwa ichi, anoti Saylists inzira inonakidza yekutaura inobvumidza vana dzidzira ruzha pasina kunzwa kumanikidzwa kana kufinhwa.
Kune chikamu chayo, the CEO weWarner Mumhanzi, Tony Harlow, anoti:
Kubatsira vanhu kuti vataure zvavanofunga ndiko kwakakosha pane zvatinoita, uye tinotarisira kuti nekugadzira chishandiso chekubata uye chinowanikwa senge remazita, tinogona kubatsira chero munhu ane dambudziko rekutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music Inotangisa Saylist Kubatsira Vanhu Vane Matambudziko Ekutaura
Apple inoburitsa watchOS 7.3.3, iOS 14.4.2, uye iPadOS 14.4.2